အာဖရိကအတွက်စိတ်ချရသောလယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူ - Victor Farm Machinery
အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည်အာဖရိကနိုင်ငံအများစုကိုကျေးလက်ဒေသများပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် ,သူတို့ကိုအခွင့်မသာသောစီးပွားရေးမှသာယာဝပြောသောစီးပွားရေးသို့ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခဲ့သည်, ဤနည်းဖြင့်အာဖရိကလူငယ်များ၏ဘဝကိုတိုးတက်စေခြင်း။ စိုက်ပျိုးရေးသည်ဘဝလမ်းစဉ်သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖန်တီးရန်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း. ဒီကြီးစွာသောရူပါရုံကိုအောင်မြင်ရန်, အာဖရိကမှာစိုက်ပျိုးရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့လိုတယ်, နှင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုဝင်ငွေရကဏ္ sector အဖြစ်အသွင်ပြောင်း. အရင်ကထက်ပို, အာဖရိကသည်၎င်း၏စိုက်ပျိုးရေးခေတ်မီမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည်. နိုင်ငံများစွာသည်ဤစီမံကိန်းကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောကင်ညာအဖြစ်, နိုင်ဂျီးရီးယား, တောင်အာဖရိက, သွားရန်, ဘီနင်, ဂါနာ, အင်ဂိုလာနှင့် Sierra Leone, သူတို့ကလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများတင်ဒါတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနှင့်တောင်သူလယ်သမားများအားစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းများပြုလုပ်ရန်အရေးယူဆောင်ရွက်သည်.
ကျနော်တို့အများအပြားအာဖရိကနိုင်ငံများတွင်စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာများအများကြီးတင်ဒါရဲ့ပေးသွင်းဖြစ်ခဲ့သည်. ငါတို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ် 130 ကင်ညာနိုင်ငံအတွက်ဓာတ်ဆီသုံးပီလောပီနံစက် 2013, 60 နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့စက် 2017, အင်ဂိုလာအတွက်ဆန်ရိတ်စက်များနှင့်ဆန်စက်များ 2018, ယခုအခါအာဖရိကနိုင်ငံများနှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများရှိနေသည်. ဗစ်တာလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများသည်lackရိယာတွင်လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းအင်သုံးလယ်ယာစက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောဒီဇယ်မောင်းနှင်ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့အဖြစ်, ဓာတ်ဆီမောင်းဂျုံခြွေလှေ့, ဒီဇယ်မောင်းဆန်စက်များ,ဒီဇယ်ဆန်စက်များစသည်တို့ဖြစ်သည်.
Victor Farm Machinery မှထုတ်လုပ်သောစိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားသည်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်.
1.လက်တွေ့. Victor Farm Machinery ၏လယ်ယာစက်များသည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုကိုလိုက်နာသည်, အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိုကောင်းအောင်. စက်အတော်များများသည်အလုပ်မျိုးစုံဖြစ်သည် , စပါးခြွေလှေ့သည့်ပြောင်းဖူးကဲ့သို့သော, ဖဲ့ရှုးတူကြိတ်။, ဆန်စက်နှင့်ကြိတ်ခွဲစက်,နှစ်ခု function ကိုနှင့်အတူတ ဦး တည်းစက် .
2.စျေးပေါသောစျေးနှုန်း။ စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာ၏လက်တွေ့ကျပြီးကြာရှည်ခံသည့်ဝန်းကျင်ကိုသေချာစေရန်, Victor Farm Machinery သည်လယ်သမားအများစုအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်.
3.စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းများ၏ရိုးရှင်း, ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အရစက်ကိုဒီဇယ်အင်ဂျင်သို့မဟုတ်မော်တာများတပ်ဆင်နိုင်သည်,စိုက်ပျိုးရေးစက်ကိုစိတ်ကြိုက်တာယာများတပ်ဆင်။ ရနိုင်သည်.